ဒစ္စနေးလူကြီးများပေါင်းအွန်လိုင်း 18, 340 ကာတွန်း
ဒစ္စနေးလူကြီးများအတွက်ကာတွန်း - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေအဓိကဇာတ်ကောင်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူအငြိမ်းစားရှိသည်ဟုရှိရာအခန်းထဲထွက်လှိမ့်သည်။ စိတ်အားထက်သန်ပန်းချီဆရာများကျော်ကဗီဒီယိုကိုဖန်ဆင်းခဲ့သော၏အခြေခံပေါ်မှာရင်းနှီးရေးဆွဲများ၏ဖြစ်ပျက်မှုအဘို့, ဖန်တီးမှုပါးရည်နပ်ရည်နဲ့ဖန်တီးမှုကိုယ်ပိုင်အရံရင်းနှီးမြှုပ်နှံလစ္စဘွန်းမှတိပ်။ စာရင်းအင်းများဟာပေါ်တယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုယ်စားလှယ်များအသုံးပြုသူကြောင်း 44% ပေးအပ်သည်။
အဓိက > 18 + > အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့အဒစ္စနေး
အိပ်မက်နှင့်ဤအကျင့်ပျက်ခြစားမှုချင်ပင်ပန်းနေပြီလား သူတို့ပျြောအပါးအပျော်အပါးကိုပိုပြီးမှန်ကန်လူတွေအကြောင်းကိုသိသောကြောင့်ခေါ်ဆောင်သွားကာတွန်း, anime ကိုကြည့်လာကြ။ အဆိုပါပြင်းထန်သောရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်မှာလိုက်ရှာ, နှင့် Toon ဖို့အလင်းကိုကြည့်ဖို့လိုလား! ဇာတ်ကောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးစွာသောအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ, အရှက်ကွဲခြင်းကိုမသိရပါဘူး။
ရီစရာအဓိပ္ပာယ်မဲ့ပျင်းအရွယ်ရောက်စအိုကာတွန်းဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သောအခါ။ ပုံမှန်လိင်ကရပ်သည်အထိယိုယွင်းကလေးဆန်သောနောက်ပြောင်မှုများ, စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်ပုံပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ သည်စအိုအပေါက် insatiable Bok သိမ်းယူခြင်းသင့်ရဲ့ပင်စည်နိုးနှင့်မှော်အော်ဂဇင်ဖြစ်ပေါ်စေရန်ရည်ရွယ်သောသူ Entertainment က Carlson,!
စအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်အတူကာတွန်း - ယခုကြည့်ရှု
မှတ်ပုံတင်မရှိဘဲကာတွန်း - အိုင်ဖုန်းမှာကြည့်ဖို့